सत्ताको चाबी जसपा हातमा : अब कता ढल्किएला जनता समाजवादी पार्टी ? - Himali Patrika
सत्ताको चाबी जसपा हातमा : अब कता ढल्किएला जनता समाजवादी पार्टी ?
हिमाली पत्रिका १३ चैत्र २०७७, 7:03 am
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कम्युनिस्ट एकता भंगको नयाँ परिस्थितिमा सत्ताको चाबी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को हातमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि ढाल्ने रणनीतिमा लागेको माओवादी केन्द्रको सहकार्य पहलमा उक्त दलले खासै रुचि देखाएको छैन। बरु सत्ता टिकाउने प्रधानमन्त्रीको कदममा साथ दिने संकेत उसले देखाएको छ।